मानिसको पिँडौला कस्तो समस्या ले फर्किन्छ ? : पिँडौला फर्कने कारण र उपचार ! पढेर सेयर पनि गर्नुहोला
प्राय धेरै मानिसलाई खुट्टा फर्किने अर्थात् खुट्टाको पिँडौलाको मासु माथि जाने समस्याले दुःख दिने गर्दछ। खुट्टा फर्किँदा मानिसलाई असहाय पीडा हुन्छ। पिँडौला फर्कने समस्या एउटा यस्तो अवस्था हो, जसलाई पिँडौलाका मांसपेशीमा अचानक संकुचन हुन गई मांसपेशीहरु कडा हुने र दुख्ने गर्दछ।
यो के कारणले हुने गर्छ भन्ने वैज्ञानिक कारण पत्ता लागिसकेको त छैन तर मेडिकल टममा इडियोप्याथिक भन्ने गरिन्छ। यो समस्या जुनसुकै उमेर समूहका महिला वा पुरुषलाई हुन सक्छ। पिँडौला फर्किसकेपछि दुखाइ समान्यतः १० मिनेटजति रहन्छ। तर केही सेकेन्डदेखि केही घन्टासम्म रहन सक्छ। मुख्यतः पिँडौलामा यो समस्या देखिने भए पनि कहिलेकाहिं खुट्टा र तिघ्राको मांसपेशीमा समेत यस्तो समस्या देखिन्छ।
-रक्तनलीमा अवरोध भई खुट्टामा रक्त सञ्चालनमा कमी हुँदा
-रगतको विभिन्न तत्वहरुको कमी जस्तैः क्याल्सियम पोटासियम
-शरीरमा पानीको अभाव
-स्नायु प्रणलीको गडबडी
नेपाल आइडलका झक्कड थापा नेपालगंजमा अटो रिक्सा चलाउदै …(भिडियो)
अस्थायी साधन कण्डमपछि पुरुषका लागि अर्को गर्भनिरोधक..